Dambudzo Marechera Ari pakati peN’angawo Here? – Chikamu 1: Mabhingo eMunyori | Essay in Shona
Zimbabwe, Harare. Rhodes Avenue, May 1987.
Zimbabwean writers Dambudzo Marechera and Charles Mungoshi meet for the first time after years of rivalry. Photography by Ernst Schade
Zvinhu zvinosimbisa vakwasha nevaroora vaMuchape kuti vasiyana nehama dzavo dzemusango zvinosanganisira maadvert, mastanzi epasosho, madegree, TV, radio, mavhoti, hondo, nenyaya dzezvishandwa. Marechera anobata zvimwe zvezvinhu izvi neurefu hwazvo munyaya pfupi yake, “Are There People Living There?” “MuAfrica nekumwe, pane vari kuzvisiyanisa nevamwe vanemunyama…” wekusachinjwa pfungwa nemaadvert, bag nezvimwe zvinoita kuti munhu anzi munhu (The Black Insider). Kuva munhu kwamakumbe (consumer/ culture snob) kuri muzvigadzirwa. Makumbe mushini unotsenga chirungu uchisvisvina umunhu. Mirror raJacques Lacan rakatamba nevana nekuti haribudisi Mukanya vanokonzera marush hour, mishikashika nemano-fly zone ose pasi pano.
Kurota netsoka kwaMarechera kuriko here? “Handiti iri yaiva mhondoro yekwavo here yechiKiriti, yakareva ichiti, ‘VaKiriti vose vanoreva nhema’” (Tito 1: 12). Nyanduri weCrete mutsamba yaPauro anotaura chokwadi here? Kana achirevesa kuti vaKiriti vose vanonyepa, iye semuKiriti ari kunyepawo here paari kuti vaKiriti vose vanonyepa? (“The Thought of the Outside”, Michel Foucault). Marechera anotambira zvirahwe zvake pakapisira nyanduri weCrete. Munharo dzinoramba dzichitevera zita rake, vamwe vanoti, “Dambudzo tamba uchitsika pasi,” vamwe voti, “Hamumuzivi here? Munhu wenyambo.” Ndiani angaziva chokwadi chaMarechera kana nyaya dzake dzichinofira paanonzi munhu wenyambo, murwere wepfungwa, mukomana wefodya, mupostmodernist, kana kunzi maRasta awanda kudarika vanhu? Sarungano nanyanduri Ignatius Mabasa akafambira nyaya dzacho svondo rapera museri nenyaya ine musoro unoti, “Kudya zveVapfupi neKureba: Musatsamwe Marechera munhu wejee, musara, nekurasa hunhu.”
Aaron Chiundura Moyo presenting the Radio 2 (now Radio Zimbabwe) novel-reading show “Kuverengwa Kwemabhuku” in the 1990s (Courtesy: A.C Moyo).
Kushoropodza kwake vanyori veShona kune undinzindini dzimwe nguva, asi nerimwe divi kunobudisa kusagudzikana kwake kuti vanyori veShona vaakakura achiverenga vanomiririra vanhu
This Is Africa has traditionally published in English and for a brief period (2017–2018) in French but never in an African language, despite our fervent decolonial advocacy and promotion of African indigenous languages. Publishing an essay in Shona is a first for This Is Africa, and we are excited to take this bold step towards intellectualising and mainstreaming African languages, decoloniality, and the inclusion of African languages and their knowledge systems.
Chikamu 2: “Shona rimwe remadhimoni emughetto andaiedza kutiza”